စီးပွားရေးဗီဒီယိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုစတင်ရန်အဆင့် ၃ Martech Zone
စနေနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 6, 2016 တနင်္ဂနွေ, ဖေဖော်ဝါရီလ 7, 2016 Owen Hemsath
ဗွီဒီယိုစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်း အပြည့်အဝအင်အားစု၌ရှိပြီးပလက်ဖောင်းကိုအရှိန်မြှင့်သောစျေးကွက်များကအကျိုးကျေးဇူးများကိုရိတ်ရမည်။ Youtube နှင့် Google တွင်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းမှသည် Facebook ဗီဒီယိုကြော်ငြာများမှတစ်ဆင့်သင်၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုရှာဖွေခြင်းအထိ၊ ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာများသည်ကိုကိုးစားသုံးမှုထက်စာလျှင်မြန်သောထိပ်ဖျားသို့တက်သွားသည်။
At ဗီဒီယိုကျွန်ုပ်တို့သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှစ၍ စီးပွားစွမ်းဆောင်ရှင်များ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အမှတ်တံဆိပ်များအတွက်ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထိပ်တန်းစီးပွားရေးနည်းပြများနှင့်လူမှုမီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးတွင်နာမည်ကြီးအနည်းငယ်အတွက်တိုက်ရိုက်စီးဆင်းမှုနှင့်ဗီဒီယိုလှုပ်ရှားမှုများတွင်ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
မော်တော်ကားထုတ်လုပ်မှုအတွက်တပ်ဆင်သည့်လိုင်းကိုစတင်မိတ်ဆက်စဉ်က Henry Ford သည်စက်မှုလုပ်ငန်းကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဗီဒီယိုနှင့်အတူတူပါပဲ။ အောင်မြင်သောလုပ်ဆောင်မှုအဆင့်တစ်ခုစီသည်သင့်အားအောင်မြင်သောဗီဒီယိုထုတ်ကုန်နှင့်ပိုမိုနီးကပ်စေလိမ့်မည်။ ထိုလုပ်ငန်းစဉ်၏ပထမအဆင့်မှာအကြောင်းအရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖြစ်သည်။
selfie တုတ်ဖြင့်စျေးကြီးသောကင်မရာကိုမ ၀ ယ်မီပင်စျေးကွက်သမားများကသင်၏ပထမ ဦး ဆုံးဗီဒီယိုလှုံ့ဆော်မှုကိုတည်ဆောက်မည့်ပတ် ၀ န်းကျင် (ခေါင်းစဉ်များနှင့်ခေါင်းစဉ်များ) ကိုအရင်တည်ဆောက်ရမည်။ ဒါကိုမင်းရဲ့ပရိုဂရမ်းမင်းမဟာဗျူဟာလို့ခေါ်တယ်။
သင်၏အမှတ် -of အမြင်ကိုတစ်ခုအဖြစ်တည်စေပါ အာဏာရှိသောအသံ.
ဗွီဒီယိုတစ်ခုချင်းစီသည်အဓိကရည်ရွယ်ချက်ရှိသင့်သော်လည်း P3 Content Strategy သည်သင်၏အဓိကကြည့်ရှုသူအားဆွဲဆောင်နိုင်မည့်ဗီဒီယိုခေါင်းစဉ်များဖန်တီးရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်မဟုတ်သော်လည်းဤပုံစံသည်သင်၏ဗီဒီယိုများ၏ပါဝင်မှုကိုတည်ဆောက်ရန်သင့်အားကူညီလိမ့်မည် သင့်လျော်သောအရေးယူရန်ကြည့်ရှု။
အဆိုပါ P3 အကြောင်းအရာမဟာဗျူဟာ
ပါဝင်သောအရာများ (သန့်ရှင်းရေး) ဤသည်သည်သင်၏ကြည့်ရှုသူကိုဆွဲဆောင်သောအကြောင်းအရာဖြစ်သည်။ ဤဗီဒီယိုများသည်သင်၏ပရိသတ်သည်နေ့စဉ်မေးမြန်းသည့်မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုသင့်သည်။ ဤဗီဒီယိုများသည်အသုံးအနှုန်းများသို့မဟုတ်သီအိုရီများကိုလည်းသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်၊ ဒါကမင်းရဲ့အမြဲစိမ်းအကြောင်းအရာပါ။
Push အကြောင်းအရာ (Hub): ဤရွေ့ကားသင်၏အမှတ်တံဆိပ်နှင့်သင်၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုပိုမိုအာရုံစူးစိုက်သောဗီဒီယိုများဖြစ်ကြသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်၏ရုပ်သံလိုင်းသည်ကြည့်ရှုသူမြင်ရမည့်အရာများကိုသင်ဆုံးဖြတ်သည့် vlogging channel တစ်ခုကဲ့သို့အလုပ်လုပ်သည်။ တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်သင်အစီအစဉ်ကိုသင်ထိန်းချုပ်သည်၊ သင်၏လိုင်းသည်သင်၏လုပ်ငန်းနှင့်ဆက်စပ်သောအကြောင်းအရာအတွက်“ အချက်အချာ” ဖြစ်လာသည်။
Pow အကြောင်းအရာ (သူရဲကောင်း): ဒါတွေကသင့်ရဲ့ပိုကြီးတဲ့ဘတ်ဂျက်ဗီဒီယိုများ။ သင်၏စက်ရုံများကျင်းပသည့်အဓိကဖြစ်ရပ်များသို့မဟုတ်အားလပ်ရက်များနှင့် တွဲဖက်၍ ၎င်းတို့ကိုမကြာခဏထုတ်လုပ်ပြီးကောင်းမွန်စွာလည်ပတ်သင့်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ မင်းမှာမိန်းမများအတွက်ရုပ်သံလိုင်းရှိတယ်ဆိုရင်၊ မိခင်များနေ့အတွက်ပိုကြီးတဲ့ဗွီဒီယိုတစ်ခုကိုထုတ်လုပ်ခြင်းကသင့်ကိုကောင်းကောင်းအကျိုးပြုနိုင်တယ်။ အကယ်၍ သင်သည်အားကစားသမားများသို့မဟုတ်အားကစားလုပ်ငန်းရှင်များအတွက်ဗွီဒီယိုများဖန်တီးမည်ဆိုလျှင် Super Bowl သည်ပိုမိုမြင့်မားသောဗွီဒီယိုထုတ်လုပ်ရန်အခါသမယဖြစ်နိုင်သည်။
Owen ၏ Youtube သင်တန်းကိုယနေ့ရယူရန်!
Tags: ဗီဒီယိုyoutube ကyoutube စျေးကွက်ရှာဖွေရေးyoutube စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှု
Owen Hemsath သည် YouTube Specialist နှင့် Cancer Survivor ဖြစ်သည်။ သမ္မတ ဗီဒီယိုOwen သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးကိုရိုးရှင်းစွာတည်ဆောက်ခဲ့သည် ယူကျု့ချန်နယ်။ သူသည် YouTube၊ Facebook ဗီဒီယိုကြော်ငြာများ၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်းနှင့်ဗွီဒီယိုစျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းများနှင့်ပတ်သက်သောလေးစားဖွယ်ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်သည်။